Dolphin House Studios-Casper - I-Airbnb
Dolphin House Studios-Casper
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguHugh
Esi situdiyo sipholileyo, sikhaphukhaphu kwaye sinomoya sithandwa, sonwabela iimbono zolwandle, ibalcony yabucala kunye nokufikelela kwintendelezo enkulu. Ibhedi ephindwe kabini, indawo yokuhlala kunye nendawo yokutyela ene-wifi yasimahla. Kwakhona ibhedi enye yesofa. Igumbi lokuhlambela langoku elineshawa yamandla
ICasper sisitudiyo esinomoya esivulekileyo esikumgangatho wokuqala, malunga ne-40sq yeemitha kwaye ixhamla kwindawo yayo yokungena yabucala evela kwisitalato sabahambi ngeenyawo. Ibalcony ijonge kwintendelezo kunye nendawo odityanelwa kuyo ukuba uyisebenzise kwaye inika iimbono eziya ngaselwandle. Isitudiyo sinebhedi ephindwe kabini, ibhedi yesofa yemini igumbi lokuhlambela langoku elineshawa yamandla kunye nekhitshi. Kukho i-air conditioning, ifeni kunye netafile yebistro kunye nezitulo ezisetyenziswa kwibalcony.
Iintsuku eziyi-7 e Tochni
4.86 · Izimvo eziyi-16
I-studio ifumaneka kwilali yamatye yaseCypriot. Ibekwe kwisitalato sabahambi ngeenyawo ngoko ke kufuneka uhambo lweemitha ezingama-50 ukusuka kwiindawo zokupaka simahla.
Ndihlala kufutshane khawubethe intsimbi yocango okanye undinike uWhats App
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 08:00 - 19:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tochni